Mujaahidiinta Afghanistan Oo Magaalo Muhiim Ah La Wareegay. – Calamada.com
Mujaahidiinta Afghanistan Oo Magaalo Muhiim Ah La Wareegay.
calamada August 20, 2016 1 min read
Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan waxey sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan hormaro ballaaran ay ka sameeyeen qeybo ka mid ah dalkaasi.
Saacadihii lasoo dhaafay ciidamada Mujaahidiinta waxey weeraro culus ka fuliyeen gobalada Helmand’Takhar’Nagahar iyo Qunduuz oo ka wada tirsan dalka Afghanistan.
Ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islamiga Afghanistan ayaa dagaal kula wareegay magaalada Istiraatiijiga ah ee Khanabad oo ka mid ah magaalooyinka gobalka Quduuz ee dhaca dhanka Waqooy Bari ee dalkaasi.
Sidoo kale Ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ah waxey gabi ahaan la wareegeen wadada Istiraatiijiga ah ee isku xirta gobalada Baglan Iyo Qunduuz’iyagoona cagta mariyay 12 saldhig oo wadadaasi ay kal hore dhigteen ciidamada maamulka daba dhilifka Afghanistan ee dowlada Nasaarada Mareykanka ay ka dhistay dalkaasi.
Sidoo kale ciidamada Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan waxey howlgalo culus ku qaadeen degmada Khan Abaad ee gobalka Qunduuz’iyagoona gudaha u galay saldhiga degmadaasi.
Golaha deegaanka Imaarada Islaamiga ee Wilaayada Qunduuz ayaa shaaciyay in boqolkiiba Siddeetan Mujaahidiinta ay la wareegeen gacan ku heynta gobalkaasi.
Dhanka kale qarax culus oo ka dhacay Kaabul waxaa lala beegsaday gaari uu la socday sarkaal sare oo ka tirsanaay wazaarada Gaashaandhiga dowlada daba dhilifka Afghanistan kaasi oo la xaqiijiyay in qaraxa lagu dilay.
Previous: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 17-11-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 17-11-1437 Hijri.